आजको पत्रपत्रीका बाट Archives - Page 135 of 139 -
काठमाडौं - सरकारले बुधबार तोकेको अस्थायी राजधानी नै स्थायी बन्ने सम्भावना देखिएको छ । संविधानको भारा २८८ उपधारा (२) मा प्रदेशसभा राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट निर्णय भएबमोजिम हुने लेखिएको छ । यसबाट प्रदेशस संसदको दुईतिहाइ बहुमतबाट मात्र स्थायी राजधानी तोकिनेछ । आजको नागरिक दैनिकमा यो खबर छ । ...
सेनाको गाडी खरिदमा रक्षाको असहमति
काठमाडौं। विशिष्ट पदाधिकारी (भिभिआइपी)को सुरक्षाका लागि सवारीसाधन खरिद गर्न बजेट उपलब्ध गराउन रक्षा मन्त्रालयले असहमति जनाएको छ । नेपाली सेनाले भिभिआइपीको सवारीका क्रममा अगाडि र पछाडि प्रयोग हुने सवारी साधन किन्न बजेट माग्दा रक्षाले विमति जनाएको हो । सेनाले भिभिआइपीको अगुवा-पछुवाका लागि ४ वटा सुभ जिप र ५ वटा पिकअ...
शीतलहर प्रभावित बिरामीको उपचारमा डा. केसी
रौतहट। स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै १४ पटक अनशन बसेका डा. गोविन्द केसी मधेसका शीतलहर प्रभावित बिरामीको उपचारका लागि रौतहट आइपुगेका छन् । चिकित्सकसहितको उनको टोलीले गढीमाई नगरपालिका २ समनपुरको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा २ दिने नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर सुरु गरेको छ । शिविरको पहिलो दिन बिहीबार ३५ बिरामीको स्...
काठमाडौं। सातवटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने भएका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयमा शुक्रबार अपराह्न ३ देखि ४ बजे बीचमा शपथग्रहण गर्ने तयारी रहेको राष्ट्रपतिका विद्या भण्डारीका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले जानकारी दिए। सरकारले बुधबार प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर...
अन्तर्घातीलाई कारवाही गरिपाउँ भन्दै माओवादीमा एमाले नेताले दिए उजुरी
काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा चुनावमा अन्तर्घात गरेको आरोपमा माओवादी केन्द्रले दुई दर्जन नेता छानबिन सुरु गरेको छ। अन्तर्घातकै कारण पराजित भएको भन्दै वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, उर्मिला अर्याललगायतले उजुरी गरेपछि केन्द्रीय कार्यालयमा छानबिन अघि बढाएको हो। पार्टी नेताहरूकै ‘असहयोग र अन्तर्घात’ ले चुनाव...
नवराज सिलवाललाई प्रहरीले नै भगाएको खुलासा, रातारात यसरी भागे
काठमाडौं । पूर्वडीआईजी नवराज सिलवाललाई ‘भगाउन’ प्रहरीले छानबिनका गोप्य सूचना उपलब्ध गराएको खुलेको छ। एमालेको टिकटमा ललितपुर १ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित पूर्वडीआईजी सिलवालमाथि सरकारी कागजात किर्तेमा छानबिन भइरहेको छ। छानबिनका क्रममा प्रहरीबाटै सूचना लिक गरिँदा सिलवाल काठमाडौं छाड्न सफल भएको प्रहरी स्रोतको दाबी...
कांग्रेस बैठक भोलि: चुनावी परिणामबारे समीक्षा नहुने
काठमाडौं । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले चौतर्फी दबाबपछि पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक माघ ४ गतेका लागि बोलाएका छन् । आजको कान्तिपुरमा खबर छ । निर्वाचनमा पार्टी पराजयको समीक्षाका लागि तत्काल बैठक बोलाउन कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र पार्टीभित्रकै युवा नेताहरूले द...
फेरि कोइराला परिवारको विरासत फर्काउने अठोट, के–के भयो मन्डिखाटारमा ?
काठमाडौँ। कांग्रेसमा कोइराला परिवारका तीन नेताले ‘विरासत’ फर्काउने उद्घोष गरेका छन् । कांग्रेस महामन्त्री डा. शशांक, सुुजाता र डा. शेखरबीच मंगलबार भएको भेटमा पार्टीमा पुनः कोइराला परिवारको शक्ति फर्काउने विषयमा कुराकानी भएको खबर नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ । गत ४ साउनमा कांग्रेस महामन्त्री शशांकको टोखास्थित निवासमा एकस...
दलका नेताहरु बोलाएर निर्वाचन आयोगले के भन्यो ? सरकारसँग यस्तो गुनासो
काठमाडौँ। पुस १४ यता हरेक मन्त्रिपरिषद् बैठकपूर्व आयोगका पदाधिकारी प्रदेश प्रमुख नियुक्ति हुने अपेक्षा गरिरहेका हुन्छन् । तर, कि त बैठकै बस्दैन, बसे पनि त्यो सम्बन्धमा निर्णय नै गर्दैन । तीन सातायताको राजनीति प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको गतिरोधले ठप्प छ । प्रमुख पाँच ५ दलका नेतालाई मंगलबार निर्वाचन आयोगमा डाकेर प्रमुख न...
बागलुङ । बागलुङका एक डाक्टरले अमेरिकामा चामत्कारिक सफलता प्राप्त गरेका छन् । अमेरिकाको जर्जिया राज्यस्थित इन्स्टिच्युट फर बायोमेडिकल साइन्स विश्वविद्यालयमा कार्यरत डा.सुदीप खड्कासहित ११ वैज्ञानिकको टोलीले विश्वमै खतरनाक मानिएको इबोला भाइरसको औषधि पत्ता लगाएको शोधपत्र प्रतिष्ठित ‘एन्टिभाइरल रिसर्च’ जर्नलमा प्रकाशित छ । ...